Thu, Aug 16, 2018 | 21:25:26 NST
फेरि गाउँ जाँदै निर्वाचन आयोग
काठमाडौं, चैत २९ – निर्वाचन आयोग फोटो सहितको नामावली संकलनबारे रुजु गर्न फेरि गाउँ जाने भएको छ । बुधबार काठमाडौंमा कार्यक्रम गरी कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आयोगले वैशाख ३ गतेदेखि विजरण रुजु गर्न गाउँ–गाउँ जाने जानकारी दिनुभयो ।
चक्काजाम गर्ने बैद्य पक्षधर पक्राउ
भीमलाल श्रेष्ठ/उज्यालो । गोरखा, चैत २९– पार्टी नेतृत्व र सरकारले लडाकु विसर्जन गरेको भन्दै चक्काजाम गर्ने बैद्य पक्षका १६ जना कार्यकर्तालाई प्रहरीले बुधवार पक्रेको छ । बैद्य पक्षका जिल्ला नेता नारायण अधिकारीसहित १६ जनालाई सदरमुकामको लोकतान्त्रिक चोकबाट पक्रेको हो ।
लडाकुको हतियार र सुरक्षा नेपाली सेनाको जिम्मामा
काठमाडौ, चैत २९ – माओवादी लडाकुका सबै सातवटै डिभिजनमा रहेका हतियार, सुरक्षा र जिम्मेवारी लगायतको विवरण नेपाली सेनाले बुझेको छ ।
लडाकु विसर्जन गरेको भन्दै बैद्य पक्षद्वारा देशभर प्रदर्शन
काठमाडौ, चैत २९ – पार्टी नेतृत्व र सरकारले लडाकुको बिसर्जन गरेको भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीको मोहन वैद्य किरण पक्षले काठमाडौ सहित देशका बिभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेको छ । काठमाडौको कलंकी, कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर, चावहिल र रत्नपार्क लगायतका ठाउँमा वैद्य पक्षले चक्काजाम गरेर प्रदर्शन गरेको हो ।
समायोजनको बाँकी विषय आज टुंगो लाग्ने
काठमाडौ, चैत २९ – सेना समायोजनका बाँकी विषय टुंगो लगाउन बुधवार सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक बस्दैछ । दिउँसो चार बजे सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालय नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा समायोजनका लागि छनोट समिति, महानिर्देशनालयको ढाँचा लगायतका बाँकी विषयमा छलफल हुने समिति सदस्य भीम रावलले जानकारी दिनुभयो ।
लडाकुको हतियार आज सेनालाई हस्तान्तरण हुदै
काठमाडौ, चैत २९ – माओवादी लडाकुका सबै शिविरको सुरक्षा गर्न सरकारले नेपाली सेना पठाएपछि बुधवार सुरक्षा तथा हतियार हस्तान्तरण हुँदैछ । माओवादी सेनाका सातौं डिभिजन कमाण्डर सन्तु दराई परवानाका अनुसार सहायक शिविरमा रहेका हतियार र सुरक्षा पेरिमिटर नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण हुनेछ ।
लडाकुले आफ्नै कमाण्डरका गाडीमा आगो लगाए
काठमाडौं, चैत्र - २८, समायोजन प्रकृयाप्रति असन्तुष्ट लडाकुहरुले नवलपरासीको चौथो डिभिजनमा तोडफोड र आगजनी गर्दै शिविर छोडेका छन् । सम्मानजनक समायोजन हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले शिविर कमाण्डरका गाडी तथा मोटसाईकलमा आगजनी गर्दै शिविर छोडेको नवलपरासीबाट हाम्रा सहकर्मी बिद्रोही गिरीले जनाएका छन् ।
लडाकूले शिविरका सामान लान थालेपछि प्रहरी परिचालन
चितवन, चैत २८ –माओवादी लडाकुको पुर्नवर्गिकरणको काम मंगलबार पनि अगाडी बढ्न सकेन । काठमाडौंमा राजनीतिक दल र सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक बसेका कारण पूर्नवर्गिकरणको काम शुरु हुन नपाएको विशेष समिति सचिवालयका संयोजक बालानन्द शर्माले जानकारी दिनु भयो ।
संविधान निर्माणमा दलहरु गम्भीरः राष्ट्रपति
जनकपुर, चैत २८ – राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले समयमै संविधान जारी गर्न दलहरु गम्भीर भएको बताउनुभएको छ । मंगलबार जनकपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली नाट्य महोत्सवको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति यादवले दलहरु शान्ति र संविधानप्रति गम्भीर भएको आफुले पाएको बताउनुभयो ।
लडाकू, शिविर र हतियार नेपाली सेना मातहत
हिम बिष्ट/ उज्यालो । काठमाडौं, चैत २८ – सरकारले माओवादी सेनाका लडाकूलाई नेपाली सेना मातहत ल्याएको छ । सेना समायोजन विशेष समितिको मंगलबारको बैठकले लडाकू, हतियार एवं कन्टेनर, शिविर र शिविरमा रहेका भौतिक सामाग्री नेपाली सेना मातहत ल्याउने निर्णय गरेको हो । समितिले मंगलबार देखि नै लागू हुने गरि सम्पूर्ण लडाकू शिविरको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । समितिले समायोजन कार्य प्रारम्भ गर्नु अघि विशेष समितिको पूर्व निर्णय अनुरुप स्वैच्छिक अवकासको प्रक्रिया जारी रहने र समायोजन केन्द्रबाट वि...
समग्र मधेस एक प्रदेशको अडानमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छः संचारमन्त्री
काठमाडौं, चैत २८ – नवनियूक्त सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले समग्र मधेस एक प्रदेशको अडानमा पुनर्विचार गर्न सकिने बताउनु भएको छ । त्यसका लागि उपयूक्त विकल्प आउनु पर्ने र शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता हुनु पर्ने मन्त्री यादवको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पूनवर्गीकरणको काम रोकियो
काठमाडौं, चैत २८ - विभिन्न शिविरमा विवाद र झडप भएपछि लडाकू पूनवर्गीकरणको काम रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं विशेष समितिका संयोजक बाबुराम भट्टराईको निर्देशनपछि विशेष समितिको सचिवालयले काम रोकेको हो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विवाद भएकोले तत्काल काम रोक्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेपछि प्रधानमन्त्रीले काम रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
अरुले दिएको संविधान मान्य हुदैन : खनाल
काठमाडौ, चैत २८ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले कुनै संस्था वा ब्यक्तिले दिएको तयारी संबिधान नेपाली नागरिकलाई मान्य नहुने बताउनुभएको छ । शान्ति र संबिधान निर्माणमा सुझाब लिन थालिएको बिषेश टेलिफोन सम्बादमा मंगलवार सोलुखुम्बुका बासिन्दासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष खनालले अंध्यारो कोठाभित्र बनाईएको संबिधान नेपाली नागरिकले सिधै अस्वीकार गर्ने बताउनुभयो ।
एक मधेश एक प्रदेशमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ : मन्त्री यादव
काठमाडौ, चैत २८ – नवनियूक्त सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले समग्र मधेस एक प्रदेशको अडानमा पुनर्विचार गर्न सकिने बताउनुभएको छ । त्यसका लागि उपयूक्त विकल्प आउनु पर्ने र शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता हुनु पर्ने मन्त्री यादवको भनाई छ ।
एकान्त खोजेका दलहरुले सिहदरबारमा नै छलफल गर्ने
काठमाडौ, चैत २८ – संविधान निर्माणका विवादित विषयमा सहमति जुुटाउन एकान्त खोज्दै काभ्रेको धुलिखेल जाने भनेका नेताहरु सिंहदरबारमै बसेर छलफल गर्ने भएका छन् । मंगलवार दिउँसो १ बजे शान्ति मन्त्रालय सिंहदरवारमा छलफल गर्ने नेताहरुको तयारी छ ।
स्वेच्छिक अबकाश रोज्ने लडाकुको आजदेखि विदाई
काठमाडौ, चैत २८ – स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने माओवादी लडाकुको बिदाई प्रकृया मंगलवारदेखि सबै शिविरमा शुरु हुँदैछ । लडाकु कमाण्डरहरुको सोमबारको बैठकले सबै ठाउँमा आवकाशमा जान चाहने लडाकुको विदाई प्रकृया थाल्ने निर्णय गरे अनुसार काम अघि बढ्न लागेको हो ।
कार्यविधी छोटो गर्न संविधानको संशोधन हुने
हिम विष्ट/उज्यालो । काठमाडौं चैत २७ - जेठ १४ मै संविधान जारी गर्नका लागि संविधान निर्माण प्रकृया छोट्टयाउने र त्यसका लागि संविधान संशोधन गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा अहिलेकै प्रकृया अनुसार संविधान निर्माण गर्दा तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्न नसकिने निष्कर्षसहित संविधान निर्माण प्रक्रिया छोट्याउने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो ।
वन्त शसस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त
काठमाडौं, चैत २७ - शसस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा कोषराज वन्त नियुक्त हुनुभएको छ । सोमवार बेलुकी बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले वुधवारदेखि लागू हुनेगरि निमित्त महानिरीक्षक वन्तलाई शशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्री बर्षमान पुन अनन्तले जानकारी दिनुभयो । अहिलेका शशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठले वुधवारदेखि अनिवार्य अवकाश पाउदै हुनुहुन्छ ।
सडक विस्तारबारे स्थानियसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल
काठमाण्डौ, चैत २७ - प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले काठमाडौं उपत्याकाभित्र जारी सडक विस्तार बारे सोमबार स्थानियवासिन्दा र सरकारी पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सडक विस्तार तथा निर्माणबारे सरकारी निकायबाट प्रगति विवरण पनि लिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले सहर पुस्तौंको निम्ती भएकोले यसलाई राम्रो बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य भएको बताउनु भयो । बढ्दो सवारी चाप सँगै यसको विस्तार र विकास आवश्यकता भएको उहाँको भनाई थियो ।
तत्काल विशेष समितिको बैठक बोलाउन काँग्रेस एमालेको माग
माधव दुलाल/उज्यालो । काठमाडौं, चैत २७ - नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले तत्काल सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । विशेष समितिमा रहेका काँग्रेसका तर्फबाट डाक्टर रामशरण महत र एमालेका तर्फबाट भीम रावलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बैठक वोलाउन आग्रह गर्नुभएको हो ।
वैद्य दरबारीयासित मिले : मन्त्री रायमाझी
काठमाडौं, २७ चैत - स्थानीय विकासमन्त्री एवं एकीकृत नेकपा माओवादी स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायामाझीले मोहन वैद्य किरण दरबारीयासँग मिलेको आरोप लगाउनुभएको छ । संघीयता बिरोधी कित्तामा उभिएका मोहनबिक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसी, कमल थापा र वैद्यहरुको धार दरबारियासंग मिलिरहेको रायमाझीको दावी छ ।
सञ्चार मन्त्रीमा यादव र कृषि मन्त्रीमा अहमद नियुक्त
काठमाडौ, चैत २७ – प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले रिक्त रहेका सूचना तथा सञ्चार र कृषि मन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको छ । सुचना तथा सञ्चार मन्त्रीमा राजकिशोर यादव र कृषि मन्त्रीमा अकवाल अहमद नियुक्त हुनु भएको हो । उहाँहरुलाई राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले पद तथा गोपनियताको सपथ गराउनुभएको छ ।
प्रक्रिया छोट्याएर जेठ १४ मा संविधान जारी गर्ने दलहरुवीच सहमति
काठमाडौ, चैत २७ – दलहरुबीच जेठ १४ मै संविधान जारी गर्ने गरी संविधान निर्माणको प्रक्रिया छोट्याउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच सोमबार भएको छलफलमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया छोट्याउने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने संभावना बढ्यो : कोइराला
काठमाडौ, चैत २७ – नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार वन्ने संभावना बढेर गएको वताउनुभएको छ । सोमबार बुटवलमा भएको कार्यकर्ता भेलालाई संबोधन गर्दै उहाँले जेठ १४ भित्र शान्ति र संविधान टुङयाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
विवादित विषयमा चाँडै सहमति जुटाउन नेम्वाङको आग्रह
काठमाडौ, चैत २७ – संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले शान्ति र संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने यसअघिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री मार्फत दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
तीन दिनमा शिविर खाली हुन्छ : खनाल
चितवन, चैत २७ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले चैत ३० भित्र लडाकुको शिविर खाली हुने बताउनुभएको छ । चितवनका पार्टी नेता र नागरिक समाजसंग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै खनालले शान्ति प्रक्रिया निश्कर्शमा पुगे लगत्तै संबिधान निर्माणले गति पाउने बिश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।
मस्यौदा पारित गर्ने बिधिबारे सबै दलवीच छलफल हुदै
काठमाडौ, चैत २७ – संविधानको मस्यौदा पारित गर्ने विधिका बारेमा सोमबार संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलबीच छलफल हुँदैछ । दिउँसो १२ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसंग छलफल हुने प्रधामन्त्रीको नीजि सचिवालयले जनाएको छ ।
समायोजनको विषयमा माओवादी कमाण्डरको छलफल हुदै
काठमाडौ, चैत २७ – समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या, पद लगायतका विषयमा छलफल गर्न माओवादी कमाण्डरको छलफल हुँदैछ । काठमाडौमा सोमबार हुने छलफलमा माओवादी सेनाका डिभिजन कमाण्डरदेखि लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुन पासाङ्ग सहभागी हुनेछन् ।
बन्दले गाडी कम चले
काठमाडौ, चैत २७ – राष्ट्रिय जनमोर्चाले आह्वान गरेको बागमती अञ्चल बन्दका कारण काठमाडौ उपत्यका र आसपासमा कम गाडी चलेका छन् । अघिल्ला तुलनामा गाडी कम चलेको महानगरीय प्रहरीले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सडकमा सार्वजनिक र निजी गाडी चलेपनि हिजो अस्तिको जस्तो चाप भने छैन ।
महानिर्देशनालयमा प्रतिनिधित्व नभए माओवादीले लडाकू समायोजन नगर्ने
हिम बिष्ट/ उज्यालो । काठमाडौं, चैत २६ – एकीकृत नेकपा माओवादीले नेपाली सेना मातहत बन्ने महानिर्देशनालयको नेतृत्व तहमा लडाकूको प्रतिनिधित्व नभए सबै लडाकूलाई स्वेच्छिक अवकाश रोजेर शिविरबाट निकाल्ने तयारी गरेको छ । आइतबारसम्म पनि सेना समायोजनको मापदण्ड, छनौट समिति, महानिर्देशनालयमा प्रतिनिधित्वका विषयमा कुरा नमिलेपछि माओवादीले चैत ३० गतेसम्म सबै लडाकूलाई स्वेच्छिक अवकाश रोज्न लगाएर भएपनि शिविर खाली गर्ने तयारी गरेको हो । ‘महानिर्देशनालयमा नेतृत्व नभए अपमानित भएर समायोजन प्रकृया अगाडी ब...
सकियो माओवादीको ‘पैसा विवाद’
कैलाली, चैत २६ – एकीकृत नेकपा माओवादीको वैद्य पक्ष र संस्थापन पक्षबीच दुई दिनदेखि देखिएको विवाद टुंगिएको छ । दुबै पक्षको जिल्ला नेतृत्व बसेर विभिन्न ७ बुँदामा सहमति भएपछि विवाद टुंगिएको हो ।
सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक विना सहमति सकियो
काठमाडौं, चैत २६ – सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक विना कुनै सहमति सकिएको छ । माओवादीले अझै आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भएपछि बैठक विना निष्कर्ष सकिएको हो ।
मन्त्रीकै पार्टीले गर्‍यो नेपाल बन्दको घोषणा
काठमाडौं, चैत २६ – श्रम तथा यातयात व्यवस्था मन्त्री एमएस थापा अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले बैशाखको पहिलो हप्ता नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ । जातीय स्वयत्तता, पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा राज्यको नयाँ संरचना गर्नुपर्ने माग गर्दै जनमुक्ति पार्टीले बैसाख पहिलो हप्ताको ३ दिन नेपाल बन्द गर्ने भएको हो ।
प्रचण्ड र रक्षामन्त्रीबीच सेना समायोजनबारे छलफल
काठमाडौं, चैत २६ – माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र रक्षामन्त्री विजय कुमार गच्छदारबीच भेटवार्ता भएको छ । माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार भएको भेटमा रक्षामन्त्री गच्छदारले सेना समायोजन तथा संविधान निर्माणका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
जेठ १४ भित्र संविधान बन्दै बन्दैनः थापा
सुमान पुरी/ उज्यालो । काठमाडौं, चैत २६ – एकीकृत नेकपा माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापा बादलले जेठ १४ गते भित्र संविधान नबन्ने दावी गर्नु भएको छ । सुनसरीको इटहरीमा आइतबार भएको बैद्य पक्षीय कार्यकर्ता भेलामा थापाले नाममात्रको संविधान जारी गरिए पनि मान्य नहुने बताउनु भयो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगका विषयमा फेरी विवाद
काठमाडौं, चेत २६ – सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगका विषयमा तीन दलबीच फेरी विवाद भएको छ । तीन दलको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा यसअघि भएको सहमतिका विषयमै विवाद भएको हो ।
बन्दको प्रचार गर्दै हिड्ने ६ जना पक्राउ
काठमाडौं, चैत २६ - संघीयताको विरोधमा सोमवार बागमती क्षेत्र बन्दको प्रचारमा हिंडेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका ६ जना कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्रेको छ । माईकिङ्ग गर्दै हिंडिरहेका बेला अखिल छैटौंका केन्द्रीय सदस्य विष्णु पुन लगायत ६ जनालाई गाडी सहित प्रहरीले पक्रेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनाएको छ ।
लडाकुलाई सेना मातहत लैजाने प्रकृया सुरु
काठमाडौं, चैत २६ - माओवादी लडाकुका अस्थायी शिविर खाली गरी लडाकु र हतियार नेपाली सेनाको मातहत लैजाने प्रकृया शुरु भएको छ । सबै सातवटै शिविरमा काम शुरु भएको विशेष समिति सचिवालयका संयोजक बालानन्द शर्माले जानकारी दिनुभयो । सचिवालयले आउँदो ३० गतेसम्म लडाकु र हतियार सेनाको ब्यारेकमा थन्काएर फर्कनेछ । सचिवालयले आइतवारदेखि समायोजन रोजेका लडाकुलाई फेरि अवकाशको अवसर दिएर बिदाई पनि गर्दैछ ।
धनगढीमा संस्थापन पक्ष र वैद्य पक्षबीचको टकराव कायमै
धनगढी, चैत २६ - रकम उठाउने बारेमा एकीकृत नेकपा माओवादीको वैद्य पक्ष र संस्थापन पक्षबीच शनिवारदेखि चर्किएको विवाद झन बढेको छ । वैद्य पक्षका कार्यकर्ताहरुले पार्टी कार्यालयका कागजातहरु आइतवार नियन्त्रणमा लिएका छन भने केही कागजातहरु जलाएका छन । वैद्य पक्षले धनगढीको क्याम्पस चोक नजिकै रहेको पार्टीको कार्यालय शनिवारदेखि नै कब्जामा लिएको हो ।
तीन दलबीच छलफल हुँदै
काठमाडौं, चैत्र २६ -शान्ति प्रक्रियामा सहमति जुटाउन प्रमुख तीन दलको बैठक आज बस्दैछ । बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच हुने छलफलमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगका विषयमा छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् । बैठकले कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन प्रयास गर्ने नेपाली कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । पश्चाताप, परिपूरण, क्षमादान र कारबाहीको सिफारिस भित्र रहेर मेलमिलापको आधार खोज्ने कार्यविधि पारित गरेपछि त्यसलाई अन्ति...